kuwa daqliga yar 36%
Macalimiinta kala midibka ah 12%
TacliinDugsiga citywide magnetka. Fasalada lagu dhigto Ingiriisi iyo Isbaanish (laba luqadood oo is-dhexgal ah). Waxay bixisaa habraac horumarsan, shaqaale laba luqadood oo Isbaanish ah, iyo barnaamijka Bartayaasha Luuqadda Ingiriisiga.
Barnaamijyo dheeraad ahWaxay bixisaa hawlaha dugsiga kadib, oo ay ku jiraan daryeelka da'da ee dugsiga caruurta Minneapolis & GEMS & GISE. Waxay Iskaashiga la leedahay bulshada Lake Nokomis - Wenonah (K-1).
GaadiidBaabuur raaca laga bixiiyo xaafadaha Wenonah, keewaydin, Morris Park, iyo xaafadaha Minnehaha iyo Ericsson ee koonfurta Minnehaha Creek. Ka fiiri halkan xuduudaha saxda ah: https://exploremps.org/School/lake_nokomis_keewaydin_elementary_school_.